Wasiiro gaaray Jowhar iyo wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta oo furmaya (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Wafdi Wasiiro ah oo uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa ayaa goor dhow gaaray magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo ay kaga qeyb geli doonaan furitaanka wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Qaban qaabada xaflada furitaanka wajiga labaad ee shirka ayaa xilligan ka socota xarunta hoolka shirarka ee deegaanka u ah ergooyinka labada gobol, waxaana koox fanaaniin ah ay ka qaadayaan heeso.
Wariyaha Jowhar.com ayaa soo sheegaya in saacadaha soo socda ay soo gaari doonaan hoolka shirarka wafdiga Wasiirada ee uu hogaaminayo Wasiir Odawaa, waxaana si rasmi ah uu u furi doonaa shirka maamul u sameynta labada gobol wajigiisa labaad.
Ergooyin ka socota labada gobol ayaa ku sugan hoolka shirarka, sidoo kale qaar ka mid ah duubabka dhaqanka labada gobol ka soo jeeda ayaa iyana xaadir ku ah.
Wajiga labaad ee shirka ayaa maanta bilaabaya, iyadoo qaar ka mid ah duubab dhaqameedyada ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ay diidan yihiin shirka Jowhar, iyadoo magaalada Beledweyn uu ka socdo shirweyne dib u heshiisiin oo ay ka qeyb galayaan qaar ka mid ah beelaha dega Gobolka Hiiraan.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo wadooyinka soo gala xarunta shirka la dhigay ciidamo kala duwan.
Awaamiir hor leh ayaa ka soo baxday masuuliyiinta dhanka ammaanka Maamulka Puntland